WAR DEG DEG AH+AKHRISO: Aqalka Sare ee D. Faderaalka Soomaaliya oo soo saaray War deg deg ah, oo aan farxad galineyn kooxda Nabad Iyo Nolol. – Puntlandtimes
WAR DEG DEG AH+AKHRISO: Aqalka Sare ee D. Faderaalka Soomaaliya oo soo saaray War deg deg ah, oo aan farxad galineyn kooxda Nabad Iyo Nolol.
MUQDISHO(P-TIMES)- Guddiga Joogtada ah ee golaha Aqalka Sare ee Jamhuuriyada Faderaaliga ah Soomaaliya ayaa soo saaray warsaxaafadeed deg deg ah oo ay uga hadleen sadex qodob oo muhiim u ah dawladnimada Soomaaliya, waxayna si adag uga digeen arrimaha ka socda gudaha dalka.
Golaha ayaa cambaareeyey weeraradii Argagixiso ee kadhacay degmada Hodan ee gobalka Banaadir, waxayna Allaah uga baryeen shacabkii waxyeeladu kasoo gaartay in uu Ilaahay Jano Fardowsa ka waraabiyo.
Goluhu wuxuu dib u dhigay kalfadhiga Aqalka Sare oo furmi lahaa maanta 10 September 2018, waxaana dib loogu dhigay Sababo ammaan iyo Farsamo, iyadoo ay soo baxeen wararka sheegaya in Aqalka Sare ay faragalin ku wado Xukuumadda Faderaalka.
Sidaas oo kale goluhu waxay welwel iyo walaac ka muujiyeen xaaladda siyaasadeed ee dalka, waxayna cadeeyeen in ay ka xun yihiin Siyaasadda, Amniga iyo Nidaamka Faderaalka oo sii xumaanaysay sannadkii u dambeeyey, waxayna sheegeen in ay doorkooda qaadan doonaan.
Waxaan odelad mahan somalied ee wadada mesha lakensaday si somali logu kufsado shabaabkuna waa iyagga hadeyba haystan ciidanky nabadsugidda